Monday July 13, 2020 - 13:38:14 in Wararka by Super Admin
Horumarinta Dekeduhu, waa Muraayadaha laga arko dawladnimada, isla markaana waa marin ay muhiim tahay inuu yeesho, Muuqaal dawladnimo oo dhamaystiran.
Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng. Siciid Xasan Cabdilahi, waxa uu la yimi hanaan hoggaamineed oo wadaniyadii ka muuqato iyo dedaalo uu ku horumarinaayo Dekeda Berbera, oo hada ah mid ka dhisan Qalab ahaan, shaqo ahaan iyo aqoon ahaanba. Dekeda Berbera waxay maanta leedahay shaqaale xirfadoodu stays, qaarkood uu Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi kusoo tabo-baray dalka dibadiisa, saido waxay leedahay shaqo lagu tabo-baray gudaha dalka.
Sadexdii sanadood ee u dambeeyey waxa muuqata oo markhaati ma doonaa in Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi dhexda u xidhatay dhismaha iyo dayac-tirka dekedaha Somaliland itaal ay doonaanbaa ha lahadeen’e, waxaana kowka ah, Dekeda weyn ee Berbera oo noqotay mid casriya,
isla markaana u guurtay inay la tartanto dekedaha dhigeeda ah ee geeska, waxa kaloo dhowaan dhamaan doonaa Dhismaha Dekeda cusub ee 400, ah iyadoo uu ku xigo dhisme kale, oo isna 400 ah oo noqon doonaa Deked kaloo Casriya.
Himilooyinkaa hirgelitaankooda waxa qayb-weyn ku lahaa madaxweynaha Somaliland iyo Maareeyihiisa Dekeda oo daacad ka noqday taabo-qaadka mashaaricda lagu horumarinaayo Dekeda Berbera.
Cabdikhadar Xaamud Cali